5 Handy Transport Hacks For Luton Travelers | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Britain > 5 Handy Transport Hacks For Luton Travelers
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 30/10/2020)
Kazhinji akavhiringidzwa yakareba mumvuri wawo muvakidzani hombe London, Luton muna Bedfordshire ari chiwanikwa izvozvo zviripo kushanyirwa yakavanzwa.
Umbwa vachitevera kubatwa zviri County kubudikidza Saxons muzana remakore rechitanhatu, yakatanga upenyu sechipo 'tun' (ugari) izvo ikamera pamahombekombe poRwizi Lea. emakore Fast Forward mashomanana, uye 'Lea tun' aiva svikiro kadikidiki musika muguta vamwe 800 vagari, vakapona ainyanya nokurima uye zvokutengeserana.
mazuva ano, chizvarwa Lutonites uye vaenzi zvizhinji zvinokwezva kuti varambe vakabatikana - kusanganisira hotspots senge minda yakasvibira uye inonakidza nhoroondo yezvigadzirwa zveStockwood Discovery Center uye nemakomo asingafadzi, mipata, uye Hiking mudungwe munzira yeMakomo eBarton Nzvimbo Yemhuka.
Uye zvakare nzvimbo nyore kuwana famba uye kwakajeka umbowo adventures mberi afield - kudaro kuti mupfungwa, pano vari shanu batsira senga hacks nokuti Luton vafambi.
Bus pakufamba kunounza makomborero akawanda - zviri kutsanya, zviri nyore, uye inogona kusiya yakaderera tsoka yekabhoni kupfuura motokari kufamba (asi kwete kupfuura zvitima, chitima kufamba ichiri kunzi kupfuura Eco-ushamwari chokufambisa).
Uye muna Luton, uyewo kunozarura mikana zvinoshamisa kuziva veko, izvo pakarepo unzwe zvakawanda kumba.
Luton Council kuti bhazi nzira Info Zvinokosha kubvunza asati asvika yako muguta.
Kana uri vachishandisa Luton kwekanguva, kutenga bhasikoro riri kwakajeka pfungwa.
Kune zvakawanda kumaruwa nzvimbo kuongorora pedyo uye vaviri-mavhiri chokufambisa kunoita tichiyambuka peguta mwana mutambo.
Cycle King pa 56-66 Dunstable Road muna Luton ane zvakasiyana-siyana bikes, kusanganisira yemagetsi, tandems, uye kunyange penny-farthings - iwe zvechokwadi uchawana chimwe chinhu chakakodzera.
Unogona kuenda nyore kuna Luton ichinyaradzwa chitima kubva dzokugara akaita London, Birmingham uye mberi afield, saka hapana kuzvipembedza arege kufunga nokuda kwenyu inotevera mhuri zororo.
Browse Luton Station padandemutande peji National Rail raMwari uye uchawana zvakawanda pamusoro kusvika uye kubva chiteshi, zvivakwa zvakaita sezvimbuzi, uye kufamba kwekuwana.
Pane kunyange batsira mepu kuitira iwe kuwana mabheyaringi yako - penya.
Kana uri kuronga kuti pendi Luton dzvuku, Mugshot imwe tekisi kutora iwe pakati makomba achidiridzira ipfungwa akachenjera.
Uchaona zvakawanda curbside tekisi nzira, asi goluton.com mumwe dzaishandisa pakukura reguta uye unogona kuponesa mari ne Mugshot mberi paIndaneti.
Chimwe chinhu chakakura nezvekutakurwa kwetekisi hakuchina kudiwa mutyairi wakasarudzwa - zvakadaro boka rako rese unogona kunakidzwa nezvakadya husiku hwese.
Luton Airport chinhu chinotyisa launchpad ndege kune zvakawanda zvinofadza dzakasiyana - kusanganisira Aberdeen, Malaga, uye Zurich - saka zuva, gungwa, uye kunyange sinou ingori hopfupi pfupi kure.
Kana uri vasununguka motokari kune yendege, SkyParkSecure.com ane Luton Airport kupaka kuti njodzi uye inokwanisika.
With tasva yako stowed makachengeteka, unogona jeti kure kunzwa akadzikama zvachose.
Tevera izvi shanu batsira chokufambisa hacks uye uchaita kunyatsoshandisa Luton - unogona tenda isu paya!
Ndizvo zvatataura! Goverana ako wega maLuton matipi ekufamba nekugovana iyi blog positi pa Twitter.
Kuwana zvakanakisisa kupaka muLondon kushandiswa SkyParkSecure, asi kuti zvakanakisisa chitima matikiti kuLondon, shandisa Save A Train.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-handy-transport-hacks-for-luton-travellers%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / Zh-CN kuti / ja kana / TR uye mimwe mitauro.
#nhandare yendege #paki Luton travellers nezvitima